Mitory an’i Kristy : manan-danja kokoa.
"Ahoana ary no izy, ry rahalahy? Raha miangona hianareo, misy to-hanao hira hianareo, misy to-hanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikan-teny. Aoka ny zavatra rehetra hatao ho .fampandrosoana." — 1 Kôr. 14:26.
Misy asa lehibe tokony hatao eo anivon'izao tontolo izao. Tokony hiova fo ireo lehilahy sy vehivavy; sy amin'ny alalan'ny fanomezam-pasoavan'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra na amin'ny fanaovana fahagagana, fa amin'ny alalan'ny fitoriana an'i Kristy voahombo. Nahoana isika no mampihemotra ny fotoana hanaovana ezaka hanova izao tontolo izao ho tonga tsaratsara kokoa? Nahoana isika no miandry hahavita zavatra mahatalanjona na hahazo fitaovana lafo vidy? Na dia tsotra aza ny tontolo misy anao, na dia sokajina ho ambany aza ny asanao, raha toa ka mifanaraka amin'ny fampianaran'i Kristy izany, dia haneho ny tenany amin'ny alalanao Izy, ary hitondra fanahy ho Azy ny hery miasa mangina avy aminao. Hanome voninahitra ireo malemy sy osa izay mikatsaka fatratra ny hanao asa fanompoana ho Azy Izy. Amin'izay rehetra ataontsika, na miasa any amin'ny toeram-pivarotana isika, na any amin'ny toeram-piompiana, na any amin'ny birao, dia tokony hanao ezaka mba hamonjena fanahy.
Tokony hamafy eny amoron'ny rano isika, hampitoetra ny fanahintsika ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, hiasa dieny mbola andro, hampiasa ireo fitaovana izay napetraka tamintsika mba hanompoana Ilay Mpampianatra. Na inona na inona azon'ny tanantsika atao, dia tokony hanao izany amin'ny fifaliana isika; na inona na inona fanatitra izay angatahina hataontsika, dia tokony hataontsika amin'ny fifaliana izany. Eo am-pamafazana eny amoron'ny rano, dia hahita ny fahamarinan'ilay teny manao hoe isika: "Fa izao no lazaiko: Izay mamafr kely, dia kely no hojinjany; fa izay mama be, dia be kosa no hojinjany." - 2 Kôr. 9:6.
Ny fahasoavana, ilay fahasoavana feno fiandrianana no nahazoantsika ny zavatra rehetra. Ny fahasoavana no nitondra ny fanavotana antsika, ny famerenana antsika amin'ny laoniny, ny fananganana antsika ho mpandova miaraka amin'i Jesosy Kristy. Aoka haseho amin'ny hafa izany fahasoavana izany.
Raisin'ny Mpamonjy ireo izay nokatsahiny mba hotefeny sy hampiasainy ho voninahitry ny anarany irery ihany. Mampiasa fitaovana izay handalovan'ny hafa fotsiny Izy, ary miasa ao anatin'izay rehetra manolo-tena ho Azy. Fifaliana ho Azy ny mandray fitaovana izay toa tahaka ny tsy misy azo antenaina intsony, dia ireo fanahy izay nampidinin'i Satana tombambidy sy nampiasainy ho amin'ny asany, ary manamboatra izany fanahy izany ho fototry ny fanehoany ny fahasoavany. Mahafaly Azy ny mamonjy azy ireo amin'ny fahoriana sy amin'ny fahatezerana izay hirehitra amin'ireo tsy mankato. Mampiasa ny zanany ho amin'ny fanatanterahana ity asa ity sy ny fahombiazan'izany Izy. Mandray valisoa sarobidy sahady izy ireo na dia mbola eto an-tany aza. — RH, 5 Jan. 1905.